'अरु गठबन्धनको साझा उम्मेदवार, म जनताको साझा उम्मेदवार'
‘अरु गठबन्धनको साझा उम्मेदवार, म जनताको साझा उम्मेदवार’
पोखरा, १७ मंसिर । कुनैबेला गाउँबाट शहर घेर्ने भन्दै जनयुद्धमा होमिएका हेमबहादुर थापा ‘किरण’ अहिले पोखरालाई स्याटेलाइट सिटीहरुले घेर्ने विकासे योजनासहित चुनावमा होमिएका छन् । जनयुद्धको बेला सर्वहाराकरणको स्पिरिट पकड्ने भन्दै घरबाट अंश मागेर पार्टीमा लालपूर्जा बुझाउन पुगेका थापाको रणनीति फेरिएको छ । व्यवस्था फेर्ने अभियानमा उत्कर्षमा विरता जगाएका उनी अहिले अवस्था फेर्ने अभियानमा उद्यमशीलता जगाउँदै समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा सक्रिय छन् ।
भूगोल एकीकरण र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि मुलुक समृद्धिकरणको युगमा प्रवेश गरेको बुझाईसहित उनी वैकल्पिक राजनीतिको बागडोर सम्हालिरहेका छन् कास्कीमा । हाल उनी डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबाट कास्की क्षेत्र नं. २ ‘क’मा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारको रुपमा चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।
विद्यार्थी राजनीति हुँदै विकासे नेतासम्म
पोखरा लेखनाथ-३३, भोटेपोखरीमा २०४० वैशान १ गते जन्मिएका थापाले आफू अध्ययनरत कालिका मावि आँपुभञ्ज्याङ भरतपोखरीमा अखिल क्रान्तिकारी मूल इकाइ समितिको अध्यक्ष हुँदै २०५३ बाट राजनीति सुरु गरे । ०५७ मा पिएन क्याम्पसमा स्ववियूका उम्मेदवार बनेका उनी ०५९ मा अखिल क्रान्तिकारी कास्कीको अध्यक्ष बने । जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते उनले राज्यबाट कुनै पनि सुविधाको दावी गरेनन् । स्वेच्छा र राजनीतिक रुपमा सहमत भएर जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएकोले उनले राज्यबाट घाइतेकोको रुपमा सुविधा लिनु उचित ठानेनन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीको तमुवान राज्य समिति सदस्य रहेका थापाले राजनीतिको कोर्ष फेरिएको भन्दै मुलुकको समृद्धिकरणको लागि बनेको नयाँ शक्ति पार्टीको संस्थापक सदस्यको रुपमा भूमिका खेले । हाल उक्त पार्टीको कास्की संयोजक रहेका उनी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी समिति सदस्य समेत हुन् ।
आदर्श नेपाल राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक समेत रहेका थापा भाषा, साहित्यको विकास र लेखनमा पनि निरन्तर सक्रिय रहेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा निरन्तर सक्रिय थापा आफूलाई विकासप्रेमी नेताको रुपमा चिनाउन चाहन्छन् ।
तिम्रोबाटो फगत भो, मेरो बाटो रगत भो
बलिदानले चुक्ता गर्छु जीवनका घाटाहरु
जनयुद्धको बेला किरण थापाको नामले चिनिने हेमबहादुर थापा ‘अमोद’ले लेखेको गजलको शेर हो यो । थापा र उनको पुस्ताले देखेको संघीय गणतन्त्र नेपालको सपना पूरा भइसकेको छ र जनताको संविधान जनताले लेख्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।
जनयुद्धमा पटक पटक घाइते भए पनि खुसीको कुरा उनले जीवनका घाटाहरु बलिदानले चुक्ता गर्नुपरेन । उनको काँधमा नयाँ अभिभारा थपियो । र, त उनी समृद्धिको सपना बाँढ्दै गाउँशहर चहारिरहेका भेटिन्छन् ।
पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा चिनिएको सुन्दर तथा रमणीय शहर पोखरा अव्यवस्थित शहरीकरणले कुरुप बन्दै गइरहेको छ । चिन्ता व्यक्त गरेर मात्रै हुँदैन । उनीसँग योजना पनि छ पोखरा व्यवस्थित गर्ने । ‘अहिलेको पोखराका मुख्य बजार क्षेत्रहरुमा बढ्दै गएके अव्यवस्थित शहरीकरणलाई ध्यान दिँदै उप-नगर (स्याटेलाइट सिटी)को अवधारणालाई अगाडि सार्नेछु,’ उनी भन्छन्, ‘यसअन्तर्गत मादी उपत्यका (भोर्लेटार, सिसाघाट, करापुटार, पोल्याङटार) काली-मोदी उपत्यका (कुश्मा, बागलुङ, बलेवा, ग्याँदी, फलेवास) चेपे-मर्स्याङ्दी उपत्यका (राइनासटार, पालुङटार, गाईखुरटार, च्याङलीटार, भानु नगरपालिका) कालीगण्डकी उपत्यका (चापाकोट, रामपुर, पुटार) ढोरफिर्दी, खैरेनी, भीमादलाई द्रुत/सुरुङ मार्गले जाडी वृहत्तर पोखरा (ग्रेटर पोखरा)लाई मूर्ता दिनेछु,’ उनले आफ्नो योजनाको व्याख्या गरे । यो योजना कार्यान्वयन गर्न सके अव्यवस्थित शहरीकरणको चाप घट्ने तथा गाउँहरु खाली हुने समस्या सम्बोधन हुने उनको बुझाई छ । शहर मात्र होइन, गाउँ पनि व्यवस्थित बनाउने योजना थापाले सुनाए ।
प्रदेश नं. ४ को पर्यटकीय गुरुयोजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने, उनीहरुको बसाई लम्ब्याउने, पदमार्ग संरक्षण तथा स्तरोन्नति र नयाँ पदमार्गको खोजी गर्दै पर्यटनमैत्री पूर्वाधानर निर्माण गर्दै पर्यटन विकासमा जोड दिने उनको सपना छ ।
गठबन्धनका कानुनी र नैतिक सीमाहरु छन् । जनताको साझा उम्मेदवार हुँ । यहाँ पार्टीका साझा उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ । ‘केन्द्रबाट राणा प्रधानमन्त्रीले बडाहाकिम खटाएजस्तो खटाउनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई सबै पार्टीका नेताहरुले भन्नुभएको छ, यी केन्द्रबाट खटाइएका बडा हाकिमभन्दा तपाईंलाई भोट हाल्छौं भन्नुभएको छ ।’
बदलिएको समाज, बदलिएको सपना
बिपीले उठाएको समाजवादको सपना कांग्रेसले बिर्सिएको बुझाई छ थापाको । ‘बिपीको समाजवादको सपना कांग्रेसले नै बिर्सिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो त शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण गर्ने कम्युनिष्ट समाजवादीहरु पनि हामीले भोगेकै छौं । अब नयाँ युगमा पुँजीवाद र समाजवादका असफलताका कारणहरु खोजेर नयाँ बाटो बनाउनुपर्छ ।’
के हो त नयाँ बाटो ? उनको सहज जवाफ छ, ‘लोकतन्त्रातिक शक्तिको प्रगतिशीलकरण र कम्युनिष्ट शक्तिको लोकतान्त्रिकरण । अझ सजिलो भाषामा भन्दा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग प्रक्रिया छ, प्रगतिशील एजेन्डा छैन, कम्युनिष्ट भन्नेसँग प्रगतिशील एजेन्डा छ तर उनीहरु लोकतन्त्रको सवालमा कमजोर । यसर्थ, यी दुवै समस्याको समाधान वाम-लोकतान्त्रिक बाटो हो । नयाँ शक्तिले यही भनिरहेको छ ।’ नयाँ शक्तिले इतिहासबाट शिक्षा लिँदै समुन्नत समाजवादको अवधारणा ल्याएको उनको बुझाई छ ।
आधा जीवन व्यवस्था फेर्न, आधा जीवन अवस्था फेर्न
‘राजतन्त्रको राईंदाई चल्ने बेलामा गणतन्त्रको सपना गाउँबस्तीमा पुर्‍याउन जिऊ हत्केलामा राखेर हिँडेको योद्धा हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले समृद्धिको सपना बोकेर हिंडेको छु, बिस्तारै सबै यही बाटोमा हिंडिरहेका छन् ।’ आफ्नो विगतको लगानी र भविष्यको सपना दुवै मतदाताले मनपराउने उनको विश्वास छ ।
शक्तिशाली गठबन्धनहरु प्रतिष्पर्धामा छन्, तपाईंलाई भोट कसले हाल्छ त ? राजनीतिमा झण्डै दुई दशक जीवन बाँचेका उनी आत्मविश्वासका साथ भन्छन्, ‘म मेरो क्षेत्रका हरेक बस्तीमा पुगेको छु र नागरिकको दुःखसुखसँग जोडिएको छु । व्यवस्था फेर्ने अभियानमा जनयुद्धमा लागेँ र घाइते भएँ, जनआन्दोलनमा लागेँ र त्यसपछि विकास निर्माणको अभियानमा केन्द्रित भएँ,’ उनको दावी छ, ‘विगतको लगानी मात्र होइन, मसँग भविष्यको स्पष्ट योजना पनि छ, पोखरालाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउँदै सेटेलाइट सिटीहरुबाट घेरिएको सुन्दर शहर बनाउने दूरदृष्टि मैले मेरो घोषणापत्रमा स्पष्टरुपमा पस्किएको छु र त्यसलाई आदरणीय मतदाताहरुले मन पराउनुभएको छ ।’
उनले आफ्नो सपना सुनाउँदै भने, मेरो आधा र ऊर्जाशील उमेर व्यवस्था फेर्न लगाएँ । अब बाँकी रहेको उमेर सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि खर्चने चाहना छ ।’
नयाँ गन्तव्यमा पुग्न नयाँ बाटो हिड्नुपर्ने उनको बुझाई छ । ‘मतदाताहरु बिस्तारै नयाँ अवस्था बुझिरहनुभएको छ, बाहिर केही बाध्यताहरु होलान्,’ उनी भन्छन्, ‘तर भित्रभित्र मन बदलिरहनुभएको छ, मैले हरेक भेटघाटमा यस्तै महसुस गरेको छु । मलाई विश्वास छ, यसपालिको नतिजाले धेरैलाई झस्काउने छ ।’